ဒူဒူကြီး: Control Valves (၅) - Control Valve Sizing for Water Systems
Control Valves (၅) - Control Valve Sizing for Water Systems
two-port valves တွေမှာ fluid စီးဆင်းတဲ့အခါ၊ 'cavitation' နဲ့ 'flashing' တွေဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။ valve controlling လုပ်စဉ် fluid flow ရဲ့ pressure ဟာကျဆင်းသွားပြီး၊ flow ရဲ့ velocity ကြောင့်၊ valve seat အပြင်ဖက်မှာ liquid ရဲ့ vapour pressure ထက်နိမ့်တဲ့ local pressure တခုဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ အဲဒီ အခါ၊ liquid မှာ vapour bubbles အနေနဲ့ လေဘူဘောင်းလို၊ အမြှုတ်တွေ 'ထ' ကုန်ပါတယ်။ pressure ပြန်တက်လာတဲ့အခါ၊ vapour bubbles တွေဟာ၊ မြင့်မားတဲ့ pressure နဲ့ အရှိန်ပြင်းစွာ ရုတ်တရက် ကွဲထွက်ပြိုကွဲသွားပါတယ်။
Fig. Two - port butterfly valve cavitation
ကွဲထွက်တဲ့ bubbles collapse မှ adjacent အနေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး metal surfaces တွေ ဖြစ်တဲ့ valve trim, valve body နဲ့ downstream pipework တွေ၊ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းကို "cavitation" လို့ခေါါပါတယ်။ cavitation ကြောင့် porous အဖြစ်အပေါက်တွေ၊ အချိုင့်တွေနဲ့၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ metal surface မျက်နှာပြင် ဖြစ်လာရသလို၊ protective oxide layers ကိုပါ ကွာကျစေတဲ့အတွက်၊ accelerated corrosion ကို ပေါါပေါက်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် valve မှာ noise နဲ့ vibration တွေပါဖြစ်ပေါါလာတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
valve seat area မှာ fluid flow ဟာ၊ မြင့်မားတဲ့ high velocity နဲ့စီးဆင်းတဲ့အခါ၊ valve အတွင်းမှာ high pressure drop ဆိုတဲ့ မြင့်မားတဲ့ pressure ကျဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါါစေပြီး၊ cavitation ကိုဖြစ်ပေါါစေပါတယ်။
hot liquid applications တွေမှာ၊ cavitation ပိုမိုဖြစ်ပေါါလေ့ရှိသလို၊ valve အထွက်မှ downstream pressure ဟာ၊ liquid ရဲ့ vapour pressure ထက်နိမ့်တဲ့ applications တွေမှာလည်း၊ cavitation ပိုမို ဖြစ်ပေါါလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် large sized valves တွေဟာ၊ fluid flow ကို၊ မြင့်မားတဲ့ high velocity နဲ့စီးဆင်းစေတဲ့အတွက်၊ အရွယ်အစားကြီးမားတဲ့ control valves တွေမှာ cavitation ပိုမို ဖြစ်ပေါါလေ့ ရှိပါတယ်။
Fig. Cavitation and flashing throughacontrol valve
flashing ဟာ cavitation ကဲ့သို့၊ metal surface မျက်နှာပြင်တွေကို၊ ပျက်စီးစေပါတယ်။ valve outlet pressure ဟာ၊ liquid ရဲ့ vapour pressure ထက်နိမ့်ဆင်းသွားတဲ့အခါ၊ flashing ဖြစ်ပေါါပါတယ်။ valve အတွင်းမှာ၊ pressure recover အနေနဲ့ မူလ pressure သို့ ပြန်မရောက်မခြင်း၊ fluid ဟာ vapour အဖြစ်၊ connecting pipe အတွင်းသို့၊ စီးဆင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ pressure recover ဖြစ်သွားတဲ့အခါ၊ vapour collapsing အနေနဲ့ပြိုကွဲသွားတဲ့အတွက်၊ noise တွေပေါါပေါက်လာပါတယ်။ control valve ရဲ့ throttling effect ကြောင့် ပေါါပေါက်လာမယ့် vapour volume ဟာ liquid volume ထက်ကြီးမားခဲ့မယ် ဆိုရင်၊ flashing ကို့လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Fig. 'anti-cavitation' two-port globe control valve
cavitation ကို လျှော့ချဖို့၊ valve မှာဖြစ်ပေါါမယ့် pressure drop ဟာ၊ vapour pressure ထက်မနိမ့်ဖို့ လိုအပ်သလို၊ liquid ရဲ့ temperature ဟာလည်း၊ ရုတ်တရက်မပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်။ 'anti-cavitation' trim ကို control valves တွေမှာထည့်သွင်းတတ်ဆင်ပြီး၊ cavitation ကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Fig. Typical two-port valve anti-cavitation trim
anti-cavitation trim အနေနဲ့ valve plug နဲ့ valve seat တို့ရဲ့ design ပုစံတည်ဆောက်ပုံကို၊ ပြောင်းလဲ တတ်ဆင်တာဖြစ်ပါတယ်။ perforated cage ထဲမှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ valve seat နဲ့ standard equal percentage valve plug တို့ပါဝင်ပြီး၊ perforated cage ဟာ anti-cavitation cage လည်းဖြစ်ပါတယ်။ valve အတွင်း fluid ဖြတ်စီးစဉ်၊ အဆင့်တိုင်းမှာ characterized plug နဲ့ cage တို့ကြားမှာ pressure drop ဟာ split အနေနဲ့ ကွဲထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Fig. anti-cavitation trim
တနည်းအားဖြင့်် plug နဲ့ cage တို့မှ၊ split အနေနဲ့ ခွဲခြမ်းဖြတ်တောက်ခြင်းဖြင့် pressure drop ဖြစ်ပေါါမှု ကို၊ ကန့်သတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ perforated cage မှ flow paths တွေကြောင့်၊ turbulence flow ပေါါပေါက်လာသလို၊ valve အတွင်းမှာ pressure recovery ဖြစ်ပေါါလာမှု ကိုလည်း၊ လျှော့ချ ပါတယ်။ anti-cavitation trim ဟာ၊ cavitation လုံးဝ မဖြစ်ပေါါအောင်တော့၊ တားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိပဲ၊ cavitation ဖြစ်ပေါါမှုကို လျှော့ချခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
three-port valves တွေကို constant flow-rate valves တွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ three-port valves တွေကို mixed အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ diverted အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သုံးတဲ့အခါ valve ကို ဖြတ်သွားမယ့်၊ total flow- rates ဟာ၊ အပြောင်းအလဲမရှိပဲ constant အနေနဲ့ ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ process applications တွေမှာ၊ တတ်ဆင်တဲ့ အခါ constant flow-rate နဲ့ variable flow-rate ဆိုပြီး၊ loop (၂) ခု အဖြစ်၊ ခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Fig. Mixing valve (constant flow-rate, variable temperature)
အပေါါမှာ three-port control valve တလုံးကို၊ mixing valve အဖြစ် load circuit အတွက်၊ constant flow rate ရစေဖို့၊ အသုံးပြုထားတာ၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး၊ load circuit ကို emitter အနေနဲ့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။ constant flow rate ဖြတ်စီးသွားမယ့် radiator ဟာ emitter ဖြစ်ပါတယ်။ heat source ဖြစ်တဲ့ boiler ဟာ၊ steam boiler ဖြစ်နိုင်သလို၊ thermal oil boiler လည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်၊ water system အဖြစ် မသုံးနှုံးပဲ fluid system အနေနဲ့သာ၊ သုံးနှုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ radiator မှထုတ်လွှင့်မယ့် emitted heat ဟာ၊ load circuit ဖြစ်တဲ့ radiator မှာ ဖြတ်စီး သွားမယ့် fluid ရဲ့ temperature အပေါါမူတည်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် boiler အထွက်မှာရှိတဲ့ mixing valve မှာ ဖြတ်စီးသွားမယ့် fluid flow နဲ့ balancing line မှ mixing valve သို့ပြန်လာမယ့် fluid flow တို့အပေါါ မူတည်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
balance line မှာ position တခုမှာ set လုပ်ထားတဲ့ balance valve တလုံးကို တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ balance valve ဟာ piping network မှ variable flow-rate ကို၊ smooth regulation အနေနဲ့ ထိမ်းပေး ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ mixing valve ရဲ့ input port (A) ကို completely shut အနေနဲ့၊ မပိတ်စေဖို့ set လုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ minimum flow rate နဲ့ အမြဲစီးဆင်းနေဖို့ set လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် primary circuit ဖြစ်တဲ့ boiler မှာ overheating မဖြစ်စေဖို့၊ pump ကိုအသုံးပြုကာ fluid ကို၊ constant flow တခုဖြင့်၊ စီးနေစေဖို့ set လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Fig. Diverting valve (constant temperature in load circuit with variable flow)
အပေါါပုံကတော့ constant flow-rate loop မှာ၊ diverting valve ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ circuit ဖြစ်ပါတယ်။ valve position အပေါါမူတည်ပြီး load circuit မှာ၊ varying flow-rate ရရှိနိုင်ပါသတဲ့။ boiler circuit မှ fluid ဟာ၊ valve position အပေါါမူတည်ပြီး၊ ဖြတ်စီးလာတဲ့အတွက် load circuit မှာ fluid temperature ဟာ constant အနေနဲ့ အပြောင်းအလဲ မဖြစ်ပေါါတော့တာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။ radiator မှထုတ်လွှင့်မယ့် emitted heat ဟာ၊ load circuit ဖြစ်တဲ့ radiator မှာဖြတ်စီးသွားမယ့် fluid flow အပေါါမူတည်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် diverting valve ရဲ့ opening degree အပေါါမူတည်တယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
Fig. Effect of not fittingabalance valve
အပေါါက ပုံကတော့၊ set လုပ်ထားတဲ့ balance valve ကိုတတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိတဲ့၊ circuit တခုဖြစ် ပါတယ်။ control valve position ပေါါမူတည်ပြီး၊ pump curve နဲ့ system curve တို့ဟာပြောင်းလဲနေ ပါတယ်။ load circuit P1 နဲ့ balancing circuit ဆိုတဲ့ bypass circuit P2 တို့မှာ မတူညီတဲ့ pump pressure တွေ လိုအပ်နေတာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို၊ fluid တွေကို pump မှ အကုန်သယ်ဆောင်သွားလို့၊ load circuit မှာလည်း၊ deprivation တွေဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။
hugely undersized ဆိုတဲ့ အရွယ်အစားသိပ်ကိုသေးငယ်လွန်းတဲ့၊ three-port control valves တွေကို အသုံးပြုခဲ့လျှင် pumping power ပိုလိုအပ်မှာဖြစ်ပါသတဲ့။ valve controlling မှာ အတိမ်းအစောင်း မခံသလို၊ small increments of movement ဆိုတဲ့ valve ရွှေ့လျှားမှုအနည်းငယ်ပိုသွားတာနဲ့၊ valve ရဲ့ discharge ports တွေမှထွက်လာမယ့် fluid quantity ဟာလည်းပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ hugely over-sized ဆိုတဲ့ အရွယ်အစားသိပ်ကြီးမားတဲ့၊ three-port control valves တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ရင်၊ pumping power အများအပြားမလိုပေမယ့်၊ valve movement ရဲ့ အစနဲ့အဆုံးမှာ၊ fluid flow ပေါါ အနှောက်အယှက်ပေးတတ်ပါတယ်။ load ပမာဏ ရုတ်တရက်အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲ သွားစေတဲ့ အတွက်၊ inaccurate control လို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Fig. Valve authority diagrams showing three-port valves
three-port control valves တွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ two-port valves တွေလို၊ valve အရွယ်အစား မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဖို့အတွက်၊ valve authority ဆိုတဲ့ 0.2 ~ 0.5 ကြားမှ တန်ဖိုးတခုကို၊ အသုံးပြုပြီး တွက်ချက်ကြပါသတဲ့။ two-port valves တွေမှာ၊ "N" ဆိုတဲ့ valve authority တန်ဖိုးကို၊ ΔP1 လို့ခေါါတဲ့ Pressure drop acrossafully open control valve တန်ဖိုးတွက်ချက်ရာမှာအသုံးပြုပြီး၊ three-port control valves တွေမှာတော့ ΔP2 လို့ခေါါတဲ့ Pressure drop across the remainder of the circuit တန်ဖိုး တွက်ချက်ရာမှာ အသုံးပြုပါတယ်။ three-port valves တွေကို၊ mixing နဲ့ diverting applications တွေအတွက် အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ 'balanced' circuit မှာသာတတ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပြီး၊ valve အထွက်မှာဖြစ်ပေါါမယ့် pressure drop ဟာ၊ two-port valves တွေထက်နည်းတဲ့အတွက်၊ ΔP2 မှတွက်ယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ three-port valves တွေကို fluid ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ recommended velocities တွေအတွင်း၊ ရွေးချယ်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Reference and Image credit to : Control Valve Sizing for Water Systems - ကိုထွန်း, Steam Engineering Tutorials, Control Hardware : Electric/ Pneumatic Actuation, The Steam and Condensate Loop Book, ISBN 978-0-9550691-5-4, 2011. Copyright © 2012 Spirax-Sarco Limited., http://community.emerson.com/, http://www.singervalve.com/
Posted by ဒူဒူကြီး at 01:56